वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको छानबिनका लागि बन्यो समिति :: सविना कार्की :: Setopati
नेपाल वायु सेवा निगमका तीनवटै संयुक्त ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरू कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको राजीनामा माग्दै मन्त्रालय पुगेका छन्।
बिहीबार उनीहरूले पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग गरेका हुन्।
१५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरूले अधिकारीले निगम सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन्। ध्यानाकर्षण पत्रमा अध्यक्ष अधिकारीमाथि निगम सञ्चालनका लागि कुनै पनि योजना नभएको, निगमको व्यापार राम्रो हुँदा समेत कर्मचारी सञ्चय कोषमा किस्ता नबुझाएको, निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आवश्यक गुरुयोजना नबनाएको आरोप लगाइएको छ।
युनियनका संस्थाहरूले बुझाएको पत्र हातमा परेपछि मन्त्री आलेले अध्यक्ष अधिकारीलाई प्रश्न गरेका स्रोतले बताएको छ।
'रियादमा जम्बो टोली किन लगेको? हङकङ र जापान उडानमा किन ध्यान नदिएको? निगमको कार्ययोजना खोइ भन्ने लगायत विषयमा मन्त्री आलेले अध्यक्ष अधिकारीलाई सोध्नुभएको थियो,' स्रोतले भन्यो।
अध्यक्ष अधिकारीले कुनै प्रश्नको जवाफ नदिएका पनि स्रोतको भनाइ छ।
'मन्त्रीज्यूले पटकपटक प्रश्न गरेपछि अध्यक्ष बाथरुम खोज्दै जानुभयो र केही समयमै मोबाइल अफ गर्नुभयो,' स्रोतको भनाइ छ।
बिहीबारै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको छानबिनका लागि समिति गठन भएको छ। निगमभित्र पछिल्लो समय भएका असन्तुष्टि र कर्मचारीमाथि भएको दमनका विषयमा अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव डा. टोकराज पाण्डेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ।
निगम संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले गत सातादेखि नै अध्यक्ष अधिकारीको राजीनामा माग गरिरहेको हो।
अध्यक्ष अधिकारीले कर्मचारीमाथि पटकपटक अभद्र व्यवहार गरेको र आफ्नो मनोमानीमा चलाएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरेको निगमका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
'आफ्नो कमजोरी बाहिरिएपछि कर्मचारीलाई धाकधम्की दिइरहनुभएको छ। आखिर कहिलेसम्म यस्तो चल्छ? त्यसकारण अध्यक्षको राजीनामा वा बर्खास्त हुनुपर्छ, हाम्रो माग यति हो,' अध्यक्ष कुँवरले सेतोपाटीसँग भने।
गत शुक्रबार अध्यक्ष अधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाइएको उनले बताए। कुँवरका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध राम्रो छैन।
२२ अप्रिल २०२२ मा निगमले साउदी अरेबियाको रियादमा आफ्नो उडान सुरू गर्दा मन्त्री आलेले अध्यक्षलाई थोरै मानिस लैजान भनेका थिए।
'मन्त्रीको कुरा अटेर गर्दै अध्यक्ष अधिकारी ठूलो टोली लिएर रियाद पुग्नुभयो। यस विषयमा मन्त्री आलेले स्पष्टीकरण माग्नुभएको थियो,' कुँवरले भने।
निगमका यात्रु सेवा विभागका वरिष्ठ सहायक देवराज ओझाले यस विषय प्रकाशित भएको समाचार भाइबर ग्रुपमा सेयर गरेका थिए।
अध्यक्ष अधिकारीले यही वैशाख १४ गते ओझालाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर कोठा थुनेर मोबाइल बन्द गर्न लगाए र अभद्रपूर्वक धम्की दिएको कुँवरले बताए। अधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता सकिएपछि दुर्गममा सरूवा गरिदिने, जागिरबाट निस्कासन नै गरिदिने र माफी मागेको पत्र लेख्न लगाएर सही छाप गर्न समेत बाध्य पारेका समेत कुँवरको भनाइ छ।
उनका अनुसार अध्यक्ष अधिकारीले धम्की दिइरहँदा ओझा बेहोस भएका थिए। त्यसपछि अधिकारी आफैंले आफ्नो गाडीमा हालेर काठमाडौं मोडल अस्पताल लगे। अध्यक्ष अधिकारी सोही दिनबाट कार्यालयमा उपस्थित नभएको पनि कुँवरले बताए।
त्यसैले निगम संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले अध्यक्षको राजीनामा माग गरिरहेको हो।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले भने बेहोस भएको भनिएका कर्मचारीलाई आफूले गाली नगरेको यसअघि सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
'नेपाल एयरलाइन्सविरूद्धमा एउटा समाचार आएको रहेछ। निगमका एक जना कर्मचारी (ओझा) ले सेयर गर्नुभएछ। निगमको नियमअनुसार संस्था र संस्थाका प्रमुखको विरूद्धमा आएको समाचार सेयर गर्न मिल्दैन। यही कुरालाई विभागीय प्रमुख र मैले सम्झाएका थियौं,' अधिकारीले भने।
गत शुक्रबार ओझा आफैंले तनाव भएको र अध्यक्ष अधिकारीलाई भेट्न आफ्नो कार्यकक्षमा आएको उनको भनाइ छ।
'त्यति बेला अन्य केही कर्मचारी साथी पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भूकम्प आयो, भूकम्प आयो र गाह्रो भयो भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले गाडीमा राखेर अस्पताल लग्यौं,' उनले भने।
अब छानबिनका लागि गठित समितिले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले कर्मचारी ओझामाथि गरेको व्यवहारको समेत अध्ययन गरी एक साताभित्र रिपोर्ट बुझाउने छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९, ०३:०४:००